Alakamisy 28 Mey 2020. – FJKM
Alakamisy 28 Mey 2020.
Ny antony hanomezan’Andriamanitra ny Fanahiny
1-Fiarovana ny fahamasinany
Nanamavo sy nanao tsinotsinona ny Anaran’ Andriamanitra ny Zanak’ Israely tamin’ny fanompoana andriamanin-kafa , fanompoana ny sampy . Nihatra tamin’izy ireo ny famaizany ka nentina ho babo tany Babylona .Latsa-danja teo imason’ny Jentilisa noho izany anaran’ Andriamanitra .Hanamasina ny Anarany Andriamanitra amin’ny fanarenana ny fiainan’ny olona .Mifamatotra amin’izany ny fanomezany ny Fanahiny ho an’ny olona.
2-Fanavaozana ny olona
Feno fahalotoana ny fiainan’ny olona izay nanompo sampy , nanompo andriamanin-kafa .Andriamanitra fitiavana Izy ka nanafaka ny olona any amin’ny taniny .Rehefa izany , dia hanadio ny fiainan’ny olona amin’ny famazana rano sy fanomezana ny Fanahiny Izy. Raha manaiky ny fanadiovana ataon’Andriamanitra sy mandray ny Fanahy Masina ny olona dia ho tonga olom-baovao.
3-Fitarihana ny olona hiaina araka ny sitrapony
Rehefa manana ny Fanahin’Andriamanitra ny olona dia miova tanteraka ny fiainany , tonga olona tia sy mankamamy ny Tenin’ Andriamanitra (and27), tsy mandeha amin’ny faharatsiana intsony , ary mandray ny fiainam-piadanana omen’Andriamanitra ny vahoakany .Tian’Andriamanitra loatra ianao ka nomeny ny Fanahy Masina hitarika anao hamantatra ny sitrpony.Iaino ny sitrapon’Andriamanitra dia hiavaka ny fiainanao .
Efa noraisinao ve ny fanomezana avy amin’Andriamanitra ho anao? Inona no vokatra nentiny teo amin’ny fiainanao?
Sabotsy 11 Jolay 2020.
Zoma 10 Jolay 2020
Alakamisy 09 Jolay 2020.
Alarobia 08 Jolay 2020.
Talata 07 Jolay 2020.
Alatsinainy 06 Jolay 2020.
Alahady 05 Jolay 2020.